आफ्नै १३ बर्षकी छोरी रुखमा बाँधेर बला’त्कार गर्ने बुबा प’क्राउ – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/आफ्नै १३ बर्षकी छोरी रुखमा बाँधेर बला’त्कार गर्ने बुबा प’क्राउ
ईलाका प्रहरी कार्यालय फल्टुडे कैलालीले आफ्नै जेठी छोरी ब’ला’त्कार गरेको आ’रो’पमा बुबालाई प’क्राउ गरेको छ । कैलालीको चुरे गाउँ पालिका वडा न. ५ भासु बजारमा बस्ने पुरुषलाई गए राती साढे १० बजे तिर सहजपुरको जंगलबाट भागिरहेको अबस्थामा प’क्रा’उ गरेको हो ।
निजको बारेमा गत जेठ १७ गते राती प्रहरीमा उजुरी परेपछि उनि घरबाट भागि फरार रहेका थिए । ३ रात ३ दिनको प्रहरीको अथक खोजीले तेस्रो दिन सहजपुर जंगलबाट भागिरहेको अवस्थामा बिश्वकर्माको टोलीले घेराहाली प’क्रा’उ गरिएको हो । पिडितका अनुसार बुबाले भासु जंगलमा रुखमा हात खुट्टा बाँधेर र घरमै समेत ब’लात्का’र गरेको आ’रोप छ ।
बालिकालाई कसैलाई खबर गरेमा मार्ने ध’म्कि समेत दिदै आएका थिए । यस्तै हर्कतका कारण निजलाई कुनै पनि ठाउँ बाट २ वा ३ महिना पछि स्थानियले धपाउने गरेको पडित बताउँछिन । निजलाई थप कानुनी का’रबाही’का लागि जि.प्र.का. कैलाली पठाउने ईलाका प्रहरी प्रमुख ईन्सपेक्टर माधव बिश्वकर्मा बताउछन ।
मनोज गजुरेलको बिहे हुने भएपछि मिना ढकालले पनि खोजिन् केटा, लेखिन् यस्तो स्टाटस